Dhibaato ka taagan dadka reer Hindiya ee sii cayilaya – Bulsho News
Sahamin cusub oo dhawaan la sameeyey ayaa sheegaysa in dadka hindida ahi ay sii cayilayaan. Waxaana hubaradu ay ka digayaan xaalad caafimaad oo degdeg ah haddii aan dhibaatada buurnaanta sii kordhaysa si degdeg ah wax looga qaban.
Cayilka ayaa markii hore loo arkayey dhibaato ku kooban waddammada hodanka ah, hadda se waxa ay ku sii fiday sannadihii ugu dambeeyay wadamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah – mana jirto meel si degdeg ah ugu faafid badan Hindiya.
Muddo dheer oo loo yaqaanay waddan ay ka jiraan nafaqo-xumo, dadkana miisaankoodu hooseeyo, waxay jabisay shanta waddan ee ugu sarreeya xagga buurnaanta dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Qiyaas sannadkii 2016 la sameeyey waxa ay ku sheegtay inn 135 milyan oo Hindi ah ay yihiin kuwo cayilan ama buuran. Tiradaas ayay khubarada caafimaadku sheegeen in ay si xawli ah u kordheysay, dadka nafaqa-darrada ah ee dalka ku noolna a isu bedelaan kuwo cayilay.
Marka loo eego Sahankii Caafimaadka Qoyska ee ugu dambeeyay (NFHS-5), oo ah sahanka ugu ballaaran ee qoyska ee tilmaamayaasha caafimaadka iyo bulshada ee dowladda, ku dhawaad 23% ragga iyo 24% haweenka ayaa la ogaaday in ay cayilan yihiin, korodhkan ayaana ah 4% dhanka labka ah iyo dheddigaba.
Xogtu waxay sidoo kale muujinaysaa in 3.4% carruurta ka yar shanta sano ay hadda yihiin kuwo cayilan marka la barbar dhigo 2.1% sannadihii 2015-16.
“Waxaan ku jirnaa faafitaan dhanka buurnida ah oo ka taagan Hindiya iyo adduunka oo dhan, waxaanan ka baqayaa inay dhowaan noqoto masiibo haddii aan si dhaqso ah wax looga qaban,” ayuu ka digay Dr Ravindran Kumeran, oo ah dhakhtar qalliin oo ku sugan koonfurta magaalada Chennai (Madras) iyo aasaasaha meel cayilka ka wacyigelisa dadka.
Dr Kumeran waxa uu eedaynayaa hab-nololeedka caajisnimada ah iyo helitaanka fudud ee cuntooyinka raqiiska ah, ayaa ah sababta ugu weyn ee “inteena badan, gaar ahaan kuwa magaalooyinka Hindiya ku nool, ay hadda qaab ahaan isaga naaxeen”.
Actor Siddharth Mukherjee (before and after his surgery) says to be fat is “a curse”
Sida laga soo xigtay WHO, dufanka badan ee jidhku wuxuu kordhiyaa khatarta cudurrada aan la kalaqaadin, oo ay ku jiraan 13 nooc oo kansar ah, nooca-2aad ee sonkorowga, dhibaatooyinka wadnaha iyo xaaladaha kale ee saameeya sambabada. Sannadkii horena, cayilka ayaa sababay 2.8 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan ah.
Dr Pradeep Chowbey oo ka soo shaqeeyey haayad la dagaallanta cayilka xaddhaafka ah ayaa sheegay in “10kg kasta oo culeyska dheeriga ah wuxuu dhimaa nolosha saddex sano. Markaa, haddii qof uu miisaankiisu sarreeyo 50kg, waxaa laga yaabaa inuu lumiyo 15. Waxaan sidoo kale aragnay in dhimashada inta lagu jiro Covid ay saddex jeer ka badan tahay dhimashada dadka bukaannada ee hore u cayilnaa.”
“Waxaan sameynay sahan aan ku sameynay 1,000 qof seddex sano ka hor, waxaana ogaanay in miisaankaaga xad dhaafka ah uu saameeyay caafimaadkooda galmada, ayna keentay in sawir xun ay iska aaminaan taas oo saameyn ku yeelan karta maskaxda dadka una horseedi karta is-maandhaafka guurka.” ayay tidhi Dr Chowbey, oo 20 sano ka hor hormood ka ahayd kulliyad caafimaad oo ku taal hindiya.